आज विश्वभर सुरक्षित इन्टरनेट दिवस मनाईँदै, तपाईँको पासवर्ड कत्तिको सुरक्षित छ ? - Technology Khabar
» आज विश्वभर सुरक्षित इन्टरनेट दिवस मनाईँदै, तपाईँको पासवर्ड कत्तिको सुरक्षित छ ?
फेब्रुअरी ९, २०२१ अर्थात आज सुरक्षित इन्टरनेट दिवस (सेफर इन्टरनेट डे) विश्वव्यापी रूपमा मनाइन्छ। सबैलाई अनलाइन सुरक्षित रहने महत्त्व बुझ्नको लागि यो अवसर हो। यो दिवस मनाउने उद्देश्य भनेको अनलाइन टेक्नोलोजी र मोबाइल फोनको अधिक र जिम्मेवार प्रयोगलाई प्रबर्द्धन गर्नु हो।
महत्वपूर्ण कुरा के हो भने, इन्टरनेट सुरक्षाको सवालमा सन् २०२० कसरी अगाडि बढ्यो भन्ने बारे सोशल मिडियामा निकै बहस र बहस चलिरहेको छ। वास्तवमा टेक्नोलोजीको युगमा, वर्तमान पुस्ता लगभग सबै कुराको लागि इन्टरनेटमा निर्भर छ र यो साइबर अपराधको कारण पनि बढेको छ।
गत वर्ष, कोरोना संकटको बेला घरबाट काम गरेको कारण साइबर आक्रमण पनि बढेको छ र २०२१ मा यो थप बढ्ने आशा गरिएको छ। इन्टरनेटलाई सबैको पहुँचमा पुर्याउनुका साथै यसको प्रयोगलाई सुरक्षित बनाउने उद्धेश्यले प्रत्येक फेब्रुअरी ९ मा यसलाई ध्यानमा राख्दै सुरक्षित इन्टरनेट दिवस मनाउने गरिन्छ । नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रमहरु आयोजना गरेर यस दिवसलाई मनाउने गरिन्छ ।
यो दिवस सबैभन्दा पहिले युरोपबाट २००४ मा सुरु भयो। पछि २००९ बाट भने यो युरोप बाहिर विश्वव्यापी रूपमा मनाउन थालियो। हाल, नेपालसहित विश्वभर १५० भन्दा बढी देशहरूले विश्वव्यापी रूपमा सुरक्षित इन्टरनेट दिवस मनाउँछन्।
नेपालमा भने सन् २०१९ देखि सुरक्षित इन्टरनेट दिवस मनाउँदै आईएको छ ।
यसै अवसरमा इन्टरनेटमा तपाईँका एकाउन्टहरुका पासवर्ड सुरक्षित राख्ने तरिका बारेमा बताउँदै छौं।
यो पासवर्ड नराख्नुहोस्
पासवर्ड सँधै याद हुन्छ, त्यसैले धेरै प्रयोगकर्ताहरूले तिनीहरूको मोबाइल नम्बर, जन्म मिति वा जस्ता सजिला कुरालाई पासवर्डको रुपमा राख्छन्। यसो गरेर तपाईँले ह्याकर्सको काम अझ सजिलो बनाईदिनु हुन्छ। कुनै पनि पासवर्ड तोड्न, ह्याकरहरूले सर्वप्रथम यी तीन चीजहरूलाई पासवर्डको रूपमा प्रयोग गर्छन् र तिनीहरू त्यसमा सफल हुन्छन्। याद राख्नुहोस् कि नाम, जन्म मिति वा मोबाइल नम्बर तपाईको पासवर्ड नबनाउनुहोस्। पासवर्ड सँधै अनौंठो र बलियो हुनुपर्दछ।
पासवर्ड प्रत्येक आईडीको लागी फरक
अक्सर हामी हाम्रो सबै सामाजिक मिडिया प्लेटफर्महरूमा उही पासवर्ड गर्दछौं। यसै कारणले ह्याकरहरूले तपाईको सबै खाताहरू एकल पासवर्डबाटै ह्याक गर्छन्। जहिले पनि विभिन्न प्लेटफर्महरूमा बिभिन्न पासवर्डहरू प्रयोग गर्नुहोस्। जसले ह्याकिङ्गको सम्भावना कम गर्न सक्छ। साझा पासवर्डले तपाईको खातामा ह्याकरहरूलाई सहज बनाउन मद्दत पुर्‍याउँछ।
हुँदैन ह्याकर्सको शिकार
तपाईँको सामाजिक मिडिया खाताहरु ह्याकरहरुबाट बचाउनको लागि तपाईले पासवर्ड मा अक्षरहरु र संख्याहरुका अतिरिक्त विशेष क्यारेक्टर पनि प्रयोग गर्नुपर्नेछ। यदि तपाईँ त्यस्ता विशेष क्यारेक्टर वा अक्षरहरु सहितको पासवर्ड बिर्सनसक्ने स‌भावना छ भने तपाईका सबै पासवर्डहरू एक ठाउँमा लेख्नुहोस् ताकि यदि तपाईले आफ्नो पासवर्ड बिर्सनुभयो भने पनि, तपाईले त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। साथै, तपाईंको सबै प्लेटफर्महरूमा फरक पासवर्ड प्रयोग गर्नुहोस्। यी चीजहरूलाई दिमागमा राख्दै, तपाईं आफ्नो खाताहरू सुरक्षित राख्न सक्नुहुन्छ।